Tambajotra ho an’ny daholobe : hametraka TNT amin’ny tanàna 500 ny Startimes | NewsMada
Tambajotra ho an’ny daholobe : hametraka TNT amin’ny tanàna 500 ny Startimes
Hametraka fahitalavitra amin’ny alalan’ny TNT amin’ny tanàna 500 eto Madagasikara ny vondrona Startimers, orinasa sinoa, mitrandraka ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy ny serasera. Nampahafantarin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Startimes izany, omaly tao amin’ny Carlton, miaraka amin’ny fandaharana vaovao ho an’ny mpanjifa azy. « Mbola eo am-pifidianana ireo tanàna isika amin’izao fotoana izao ka misy fepetra hijerena izany, araka ny isan’ny mponina sy ny tokantrano ao amin’ilay tanàna. Miara-miasa manavaka ireo tanàna ireo ny minisitera roa, miandraikitra ny Serasera sy ny Fifandraisan-davitra », hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Serasera, Guy Laurent.
Lafo ny fametrahana io TNT io koa ezahin’ny Startimes ny hametraka izany eto Madagasikara sy any amin’ny tany afrikanina maro. Ho tombontsoan’ny maro anisa, indrindra ny any ambanivohitra, hapetraka any amin’ny sekoly na amin’ny toerana iray azon’ny maro hiarahana mijery ary maimaimpoana. Ny isan-tokantrano kosa, samy mandoa ny sarany ihany, izay marihina fa mora indrindra ity tambajotra ity, nampidirina eto Madagasikara nanomboka ny taona 2015. « Heverinay fa zakan’ny fahefa-mividin’ny Malagasy maro ny hofany, 20.000 Ar hatramin’ny 40.000 Ar ihany », hoy ny solontenan’ny Startimes eto an-toerana, Julien Zhu. Amin’izao fotoana izao, 30.000 ny mpanjifa mampiasa io tambajotra io eto Madagasikara.
Nampahafantarina ihany koa ny fandefasana fandaharana sarimihetsika sinoa mampihorin-koditra amin’ny teny frantsay eto Madagasikara sy ho an’ny tany afrikanina hafa mampiasa sy miteny frantsay. Mifanaraka amin’ny andrasan’ny mpanofa tambajotra Startimes izany, raha ny fanadihadiana vitan-dry zareo Sinoa. Mamokatra karazana sarimihetsika 300 isan-taona ny any Beijin, Renivohitr’i Chine. Beijin, foibe politika sy kolontsaina sinoa. « Misy amin’ny karazana teny 17 ireo sarimihetsika ireo, atao mamaly ny hetahetan’ny mpanjifa », hoy Julien Zhu.